शिवरात्रीको दिन ना गाबाबाहरूको माग- हिन्दू राज्य चाहियो, हामीलाई राजा चाहियो अरुलाई चिन्दैनौं ! (भिडियो) – NepalajaMedia
शिवरात्रीको दिन ना गाबाबाहरूको माग- हिन्दू राज्य चाहियो, हामीलाई राजा चाहियो अरुलाई चिन्दैनौं ! (भिडियो)
March 11, 2021 225
शिवरात्री मनाउन भारतदेखि नेपाल आएका बाबाहरूको पशुपति क्षेत्रमा चहलपहल बढेको छ । बिहीवार पर्ने शिवरात्रीका लागि निकै दिन पहिलेदेखि बाबाहरूको आउने क्रम चलिरहेको थियो ।
महाशिवरात्रीको दर्शन गर्न भारतबाट आएका साधुहरुले नेपाल ३ हजार वर्षदेखि हिन्दूराज्य भएको बताउने गरेका छन् । महाशिवरात्रीको समयमा भारतबाट आएका नागा बाबा र साधु बाबाहरुले नेपाल सदिऔंदेखि सनातन धर्मको राज्य भएको बताएका हुन् ।
नेपालमा त्रेता युगदेखि नै रामको राज्य र भगवान शिवले आफ्नो बासस्थान बनाएको ठाउँ हो यहाँ कसैले पनि अरु राज्य भन्नै पाउँदैन् यो त हिन्दू राज्य हो ।
पशुपतिमा आएका अधिकांश बाबाहरुले नेपालमा अरुलाई नचिन्ने तर राजालाई चिन्ने बताएका छन् । ‘नेपालमा हामीले चिन्ने विष्णुको अवतार भएका राजालाई चिन्छौं अरु त को हुन् को,’ भारतको गाजियावाद भदौली शिवमन्दिरबाट आएका नागा बाबा राम गिरीले लोकान्तरसँग भने, ‘हामी भगवान शिवलाई मान्छौं राजा मान्छौं ।’
Prevयस्तो तस्बिर शेयर गर्दै सुत्केरी भएको २ हप्तामा नै काममा फर्किन् नायिका करिना कपुर, सबैलाई पारिन् चकित
Nextसारा नेपालि लाइ रुवाउने खबर आमा कहाँ छिन् सोध्दा नबताएपछि पिताले छोरीलाई गो’ली हा’नेर मा’रिदिए
भावनाले १३ बर्षको कालिको उमेरमा जन्माएकी छोरी ठुली भइन्, आहा कस्तो रमाइलो ! आमा र छोरी संगै खेल्दै(भिडियो)
तितेपातीमा लुकेका अनेक फाइदाहरू…